Ungayakha Kanjani Ikhalenda Lokumaketha Komphakathi | Martech Zone
NgeSonto, Agasti 2, 2015 NgoMgqibelo, Agasti 1, 2015 Douglas Karr
U-74% wabakhangisi ubone i ukwanda kwezimoto ngemuva kokuchitha amahora angu-6 kuphela ngeviki ezinkundleni zokuxhumana kanti ama-78% wabathengi baseMelika asho lokho ezinkundleni zokuxhumana kunomthelela esinqumweni sabo sokuthenga. Ngokusho kukaQuicksprout, ukwenza ikhalenda yemidiya yokuxhumana nabantu kuzokusiza ukugxila isu lakho lezokuxhumana, ukwaba izinsizakusebenza kahle, kukusize ushicilele ngokungaguquguquki, futhi uhlele indlela ohlela ngayo nokudala okuqukethwe.
Ikhalenda lezokuxhumana lingakusiza ukukhuthaza njalo okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu, unciphise isikhathi osichitha, futhi uhlele futhi uqoqe okuqukethwe. Bona i-Quographicprout's infographic, Kungani Udinga Ikhalenda Lemidiya Yezenhlalo nokuthi Ungayakha Kanjani, ukuthola eminye imininingwane yokuthi kungani udinga ikhalenda yezokuxhumana nabantu namasu wokwenza eyodwa.
Singabalandeli abakhulu be-I-Hootsuite kanye nekhono lokuhlela izibuyekezo zomphakathi ngokulayishwa kwenqwaba futhi ubuke ukumaketha kwethu kwemithombo yezokuxhumana ngokubukwa kwekhalenda labo:
Ungalanda izifanekiso zekhalenda lokumaketha ezokuxhumana nabantu kanye nesifanekiso sokulayisha ngobuningi ngqo kusukaI-Hootsuite Ibhulogi. Sincoma ukuvuselelwa ngakunye kokumaketha ezokuxhum kufaka phakathi okulandelayo:
Ubani - Iyiphi i-akhawunti noma imaphi ama-akhawunti omuntu siqu anesibopho sokushicilela ukuvuselelwa komphakathi futhi ngubani ozoba nesibopho sokuphendula kunoma yiziphi izicelo?
Ini - Yini ozoyibhala noma oyabe? Khumbula ukuthi izithombe nevidiyo kuzongeza ekuhlanganyeleni nasekwabeni. Ngabe ucwaninge ama-hashtag ukuze uwafake ukuqinisekisa ukuthi ufinyelela izithameli ezibanzi, ezifanelekile?
kuphi - Wabelana kuphi ngesibuyekezo futhi uzosilungiselela kanjani isibuyekezo sesiteshi oshicilela kuso?
Nini - Uzobuyekeza nini? Ngokuthunyelwe okuqhutshwa umcimbi, ingabe ubala phansi ngokuhamba kwesikhathi uye emcimbini? Ukubuyekezwa okubalulekile, ingabe uyaphinda izibuyekezo ukuze izethameli zakho zikubone uma ziphuthelwa izibuyekezo zokuqala? Ngabe unayo imicimbi yokujikeleza okufana namaholide noma izingqungquthela lapho udinga khona ukushicilela ngaphambi, ngesikhathi nangemva kwaso?
Kungani - okuvame ukuphuthelwa, kungani uthumela lesi sibuyekezo senhlalo? Ukuqinisekisa ukuthi ucabanga ukuthi kungani kuzokusiza ukukhumbula ukubizelwa esenzweni ofisa ukuthi umlandeli noma umlandeli asithathe nokuthi uzolinganisa kanjani ukusebenza kokushicilela komphakathi.
Kanjani - elinye isu eliyisihluthulelo eligejiwe ... uzosikhangisa kanjani isibuyekezo? Ingabe unohlelo lokumela abasebenzi noma amakhasimende ababelane ngalo? Ingabe unayo isabelomali sokukhangisa okuthunyelwe eziteshini zenhlalo lapho izibuyekezo zomphakathi zivame ukuhlungwa (njenge-Facebook)?
Tags: ikhalendaIkhalenda lokuhlelaikhalenda lomphakathiikhalenda yezokuxhumanaikhalenda lokumaketha ezokuxhumana nabantu
Aug 5, 2015 ku-8: 43 AM
Okuthunyelwe okuhle! Ngisanda kuqala ukusebenzisa i-Twitter, ngakho-ke kuzofanele ngicabange ngamanye ala macebiso okusiza ukukhuthaza ibhulogi yami! Ngiyabonga.